IIFLETHI OKANYE IZINDLU EZIKWICOMPLEX/IZINDLU EZIKWICOMPLEX ZALE MIHLA - I-Airbnb
IIFLETHI OKANYE IZINDLU EZIKWICOMPLEX/IZINDLU EZIKWICOMPLEX ZALE MIHLA
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguChadi
Indawo yam ekufutshane neepaki, ubugcisa nenkcubeko, iindawo ezintle, iivenkile zokutyela kunye nokutya. Uza kuyithanda indawo yam ngenxa yezinto ezintle, indawo ekuyo, indawo ekufutshane, indawo engaphandle nokukhanya. Indawo yam ilungele abantu abathandanayo, abahamba ngezoshishino, iintsapho (ezinabantwana), kunye namaqela amakhulu. Inazo zonke izinto ozidingayo kunye nefenitshala ekumgangatho ophezulu kunye nezixhobo zombane. Idilesi yindawo YESAKHIWO se-Vill C&D, i-Legarda/BUKANEG ROAD. Phakathi nje kwehotele i-Travelite ne-V.
ICondo yam yakhiwe, yalungiswa yaza yahonjiswa ngendlela ekhethekileyo ngaphakathi. Yi-Huge condo 130 square, inkulu kakhulu kunoko kuboniswa kwiifoto. Amagumbi AMAKHULU aneematrasi ezikumgangatho ophezulu ezikwenza uzive uthe zava kuwo onke amagumbi okulala nemiqamelo ebulala iintsholongwane. Ifenitshala ekumgangatho ophezulu enezixhobo zasekhitshini. Iipleyiti, iglasi, amacephe, iimbiza zokupheka zonke zisemgangathweni. Ukuze usisonge zonke izigidi zee-pesos ziye zachithwa ukuze uhlangabezane nokwaneliseka kwakho. Nceda ukuba unabantu abangaphezu kwabayi-5 abaza kuhlala kuloo ndawo, uza kubhataliswa imali eyongezelelekileyo eyi-500 pesos ngosuku umntu ngamnye ukuba kuza kusebenza abantu abangaphezu kwabayi-5. Singayithetha ngakumbi ngeenkcukacha ngokuncokola ngoAirbnb. Nceda ungafaki Izinja okanye iikati. Ndiza kukunika iitawuli ezisimahla namaphepha okuhlamba izihlunu, i-shower gel, ishampu, isepha yezandla, isepha yokuhlamba izitya, Unokuza neetawuli zakho ukuba uyathanda . Ndinganikezela ngeetawuli ezongezelelekileyo ukuba kuyimfuneko okanye namashiti ebhedi ongezelelekileyo, iingubo, imiqamelo, njl. Malunga nokubhalisa xa kufikwa ndibhetyebhetye kakhulu ngokubhalisa xa ufika/ukuphuma. Ungangena okanye uphume nanini na ukuba andinalo undwendwe olubhukishe usuku olungaphambi okanye emva kwalo.
Iipesos eziyi-200/iyure yokungena ngaphambi kwexesha.
Kuza kusebenza ii-pesos eziyi-200/iyure ukuba ufuna ukuphuma emva kwexesha.
Ungandithumelela umyalezo malunga nokuba bhetyebhetye kokubhalisa xa ufika/ukuphuma.
Isatifikethi sokubhaliswa kweshishini: Iyunithi yam ibhalisiwe phantsi KWEFLETHI OKANYE INDLU EKWICOMPLEX ekuqeshweni kweeflethi okanye IZINDLU ezikwicomplex xa kunokwenzeka isebe labakhenkethi le-visa (DOT) licela ubungqina bokubhalisa.
4.91 · Izimvo eziyi-324
Indawo yeqhinga, Ukubona indawo entle, phakathi kwazo zonke iindawo ezinomtsalane, iivenkile zokutyela, amanyathelo okuya kwivenkile yokutyela kaShakey, iJollibee, iMacdonald, Ukungcamla okumnandi, iJapan, iKorea, iivenkile zokutyela zaseMeditera kunye namakhulukhulu eevenkile zokutyela ezintle zasekuhlaleni. Umgama wokuhamba ukuya eBurnham PARK kunye neSm Baguio.
Ikwindlela yeBakaneg, phakathi kweehotele eziyi-2 ezintsha ezakhiwe yihotele i-Travelite nehotele i-V
Umbuki zindwendwe ngu- Chadi
Hi everybody, thank you for considering my 2 story Condo.
I am a Clinical Practice Leader, Educator/Coordinator at one of the hospitals in Toronto, Canada and a part time professor as well at Centennial College. Relaxing, travelling, and discovering new places are an important aspects in my life.
I am a Clinical Practice Leader, Educator/Coordinator at one of the hospitals in Toronto, Canada and a part time p…
Ngoko nangoko okanye kwiiyure eziyi-5.